देशभर पर्यटकीय होटल बढे – आफ्नो समाचार
देशभर पर्यटकीय होटल बढे
Afno News — १४ माघ २०७५, सोमबार ०९:२७0comment
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा प्रचार प्रसारका कारण पछिल्लो दिनमा पर्यटकस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकासमा गुणस्तरीय उपलब्धि देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटकस्तरीय होटलको संख्या वृद्धि भएको पाइएको छ । प्रतिशतका आधारमा ३१.८ प्रतिशत होटल पोखरा क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा पर्यटकस्तरीय होटल तथा लजको सङ्ख्या १२ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई हजार ८६० पुगेको छ भने होटल श्यया सङ्ख्या ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ हजार ७९२ पुगेको छ ।
बैंकले कूल ७७ मध्ये ४७ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिएको अध्ययनलाई बैंकले सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो दिनमा घर र भवन नक्सा पास गराउनेको संख्यामा ४९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा त्यस्तो संख्या ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । विराटनगर र धनगढी क्षेत्रमा घर÷भवन नक्शा पास सङ्ख्यामा क्रमशः २.४ र ७.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने बाँकी अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य दरमा वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा समीक्षा वर्षमा ८.५ प्रतिशतले घटेको छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजश्वमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजस्व सङ्कलनमा वीरगञ्ज, पोखरा र सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा क्रमशः १०.९, ११.२ र २४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने बाँकी सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । त्यसमा धनगढी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतले र काठमाडौँ क्षेत्रमा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
लेक लागेर मृत्यु
सार्वजनिकस्थलमा पर्यटकलाई खानेपानी
सन्दिपले लिए ३ विकेट
फोन ब्यस्त र अफ हुँदा सधै बोल्ने को हुन् ?
खुम्बुमा खिचिएको पहिलो फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’
वि.सं. २०७६ बैसाख ७ गते शनिवारको राशीफल
कस्ता मानिसलाई हुदैन हृदय घात ?
पाँच वर्षभित्र ठूला जहाज १७ पुर्‍याउने तयारी
दलितलाई जग्गा दिने काुनन् बन्दै
मलेसियामा रोजगारी खुल्दै, कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने